Qaramada Midoobay Oo Sheegtay In Malaayiin Soomaali Ah Ay U Baahan Yihiin Gar-Gaar |
Qaramada Midoobay Oo Sheegtay In Malaayiin Soomaali Ah Ay U Baahan Yihiin Gar-Gaar
Moqdisho (GNN):- Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 1.5 Milyan ruux oo Somalia ah ay u baahan yihiin gargaar dhaqso ah, kaddib markii ay yaraadeen roobabkii dayrta ee la filayay inay da’aan.
Saraakiil ka tirsan hay’adda cunnada iyo beeraha adduunka ee FAO ayaa uga dhawaaqay Muqdisho shalay in cunno-yaraan ba’an ay jirto, iyagoo hay’adaha samafalka ugu baaqay inay gacan ka geystaan sidii loo quudin lahaa dadka ay cunno la’aantu saameynta ku yeelato.
Hay’adda ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dadka ugu nugul bulshada oo ay u badan yihiin barakacayaasha in si dhaqso ah loo caawiyo si looga fo’aado in nafaqo-darro iyo cudurro baahida ka dhasha ay ku dhacaan.
“Dhibaatooyinka laga baqdin qabo ayaa waxay ka dhasheen dib u dhac weyn oo ku yimid roobabkii dayrta ee la filayay inay da’aan bilihii Oktoobar iyo December ee sannadkii hore 2018-ka, saameyntii ay reebeen abaarihii ku dhuftay Somalia 2016-kii iyo 2017-kii iyo colaadao meelaha qaar ka socda,” ayaa lagu yidhi warbixinta hay’adda badbaadada cunnada ee FSNAU oo ay hawl-wadaag yihiin Hay’adda FAO.
Sidoo kale, Hay’adda ayaa sheegtay in loo baahan yahay sannadkan 2019-ka inay sii socoto kaalmada bani’aadamnimo ee caalamku siiyo Somalia, si looga fogaado inay xaaladdu ka sii darto, waxaana kaalmada ka mid ah inay sii socoto gargaarka la siiyo beeraleyda, xoolo-dhaqatada iyo kalluumeysiga si ay uga faa’iideystaan xilli roobaadka soo socda ee Guga oo lagu wao inuu billowdo Abriil 2019-ka uuna socdo illaa Juun 2019-ka.
Ugu dambeyn, Ma ahan digniintan middii ugu horreysay ee Hay’adaha ka shaqeeya gargaarka ay aadanaha ay bixiyaan, waxaase horay diniino la mid ah kuwan u bixiyay hay’ado kale oo samafal.